18.10.2018, Full time , Biotechnology / Pharmaceuticals
Company: Kobelco Supreme Engineering Company Limited
--Our Organisation isaleading provider of Project Engineering and Engineering Supply based in Myanmar. We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sector, Real Estate Development (Housing Estate, Industrial Zone Development, Hotel Resorts, Modern Farming & Agriculture based factories and Dairy Farm) and Trading (Commodities, Chemical Trading and General Trading).
•	Government Sales, Private Sales အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
•	နိုင်ငံခြားသားများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူအား ဦးစားပေးမည်။
•	BE(Mechanical) သို့မဟုတ် MBA ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
•	Engineering Sales အပိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်သက်(၁၅)နှစ် အထက်ရှိရမည်။
•	အသက် (၄၅)နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။
We offer •	Male or Feamale (1)Post
Work location Super One Supermarket အနီး၊ အမှတ်(၁၉/ဂ)၊ (န၀ဒေးရုံး)၊ န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ယာ၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
Job Function: Sales General Manager
Kobelco Supreme Engineering Company Limited
158 Days, Full time , Biotechnology / Pharmaceuticals
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	နေ့ /ည မရွှေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ •	လှိုင်သာယာတွင် နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
Our Organisation isaleading provider of Project Engineering and Engineering Supply based in Myanmar. We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sector, Real Estate Development (Housing Estate, Industrial Zone Development, Hotel Resorts, Modern Farming & Agriculture based factories and Dairy Farm) and Trading (Commodities, Chemical Trading and General Trading).
•	Government Sales, Private Sales အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ •	နိုင်ငံခြားသားများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူအား ဦးစားပေးမည်။
•	အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သူအား ဦးစားပေးမည်။ •	BBA/ Business Management Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	LCCI (or) Accounting ပိုင်းအားတတ်ရောက်ပြီး MYOB Software သုံးတတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း/HR ပိုင်းနှင့် ငွေစာရင်းပိုင်းနားလည်တတ်ကျွမ ...
Sales General Manager Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Kobelco Supreme Engineering Company Limited Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales General Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon